महँगो कारभित्र राखेर गाडियो नेताको शव – CityPokhara | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Pokhara महँगो कारभित्र राखेर गाडियो नेताको शव – CityPokhara | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Pokhara
महँगो कारभित्र राखेर गाडियो नेताको शव
Posted on May 4, 2020 May 4, 2020 /5महिना अगाडी / 11376 जनाले हेर्नुभएको
कफिनमा राखेको लासलाई कफिनसँगै चिहानमा गाडेर अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने हो । तर दक्षिण अफ्रिकाका एकजना नेताको लासलाई चाहीँ महंगो मर्सिडिज कारभित्र राखेर गाडिएको छ ।
हालै निधन भएका दक्षिण अफ्रिकी नेता ७२ वर्षीय शेकेदे बुफोन पित्सोलाई उनको आफ्नै मर्सिडिज कारभित्र राखेर अन्त्येष्टि गरिएको हो ।
जिवित छँदा चढ्ने गरेको उक्त मर्सिडिज कार उनको निकै य कार थियो । आफू मरेपछि सो कारलाई आफुसँगै अन्त्येष्टि गरियोस् भन्ने उनको चाहना थियो । सोही चाहना बमोजिम स्वर्गीय पित्सोका परिवारजनले उनको शवलाई कफिनमा राख्नुको साटो सोही कारमा राखेर सँगै अन्त्येष्टि गरिदिएका हुन् ।
सोसल डेमेाक्रेटिक पार्टीका नेता रहेका पित्सो कुनै समय निकै धनाढ्य व्यवसायीसमेत थिए । उनले विगतमा धेरै मर्सिडिज बेन्ज कार किनेका थिए । तर पछि आर्थिक संकट परेसँगै उनले सबै कार बेचे र सन् १९९० को दशकमा एउटा नयाँ मर्सिडिज कार किने ।
त्यो कार हाल खासै चालू अवस्थामा थिएन । तरपनि उनी दिनमा प्रायः सोही कारको सिटमा बस्दथे र गीत सुन्दथे । उनले उक्त कारलाई निकै माया गर्दथे । त्यसैले आफूसँगै कारको पनि अन्त्येष्टि होस् भन्ने चाहना उनको थियो ।
सोही बमोजिम अन्त्येष्टि स्थलमा एउटा कार अटाउने चिहान खनियो । उनको शवलाई कारको ड्राइभिङ सिटमा राखेर डोरीले बाँधियो । उनको हातलाई स्टेरिंङ् समाएजस्तो गरी बाँधियो ।
कार सहित उनको अन्त्येष्टि गरेको हेर्नका लागि धेरैजना मानिसहरु त्यहाँ उपस्थित भएका थिए । कोरोना भाइरस महामारीको लकडाउनको प्रतिबन्धका बीच अन्तयेष्टि स्थलमा उल्लेख्य मानिसहरु सहभागी भएका थिए । एजेन्सी
बन्दिपुरमा चाइना ग्रेटवालको झल्को दिने पर्खाल निर्माण हुदै
शैक्षिक परामर्श व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण बनाउन इक्यान कास्कीकाे माग
देसैँभरका मठमन्दिर खुला गर्न विश्वहिन्दू परिषद्को माग
कुलमान गएपछि प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा कोइरालाको नियुक्ति
भोलिदेखि चल्दैछन् लामो दूरीका यातायात, जोर-बिजोर प्रणाली लागू नहुने
उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालमा बन्धक बनाइएका २ जनाको उद्धार
कांग्रेस महामन्त्री कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर